I T Computer Tech
ကွန်ပျူတာ ပညာရပ်တွေကို သင်တန်းတက်စရာ မလိုပဲ အိမ်မှာနေရင်း လေ့လာနိုင်မယ်ဆိုရင် စိတ်မဝင်စားကြဘူးလား ❓ #နှစ်သစ်အထူးPromotionစျေးနူန်းလေးနဲ့လက်ဆောင်လေးတွေရယူလိုက်ပါ ချစ်ရတဲ့ Customerများအတွက် မေတ္တာလက်ဆောင်အနေနဲ့ photoshop အဆင့်​​မြင့်သင်ခန်းစာ Videoများ Software များ CorelDraw X7သင်ခန်းစာ Videoများ ထည့်ပေးထါးပါတယ်ခင်ဗျာ ကွန်ပျူတာ နည်းပညာတွေအကြောင်း မြန်မာလို ရှင်းပြထားတဲ့ Video သင်ခန်းစာ ၅၀၀ ကျော်၊ မြန်မာလို ရေးသားထားတဲ့ Ebooks ၁၀၀၀ ကျော် ပါဝင်တဲ့ 32GB OTG Memory Stick - 20000 Ks မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ ဘယ်မြို့ကိုမဆို အိမ်အရောက် ပို့ခ 2000 Ks တည်းနဲ့ မှာလို့ ရပါပြီ ပစ္စည်းရောက်မှကျသင့်ငွေ ပေးချေရပါမယ် ခင်ဗျာ ✅ တစ်သက်တာ အာမခံ Memory Stick ဖြစ်တဲ့အတွက် အသုံးပြုရင်း Error တစုံတရာဖြစ်ခဲ့ရင် အသစ်ပြန်လည် လဲလှယ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ကျနော်တို့ ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Memory Stick တွေမှာ OTG စနစ်လည်း ပါဝင်တာကြောင့် Ebook နဲ့ Video သင်ခန်းစာတွေကို ကွန်ပျူတာပေါ်မှာတင် မက ဖုန်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လည်း အလွယ်တကူ သက်တောင့်သက်သာ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် OTG အသုံးပြုနည်း လမ်းညွှန်စာရွက်လည်း ပူးတွဲထည့်ပေးထားပါတယ် ကြာချိန် - ရန်ကုန်မြို့တွင်း ၃ ရက်၊ အခြားမြို့များ (ရုံးပိတ်ရက်တွေ ထည့်မတွက်) ၃ ရက်မှ ၇ ရက် """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ရရှိလေ့လာနိုင်တဲ့ သင်ခန်းစာများကတော့… ⬇ ➡ အခြေခံ ကွန်ပြူတာအသုံးပြုနည်းများ ➡ အဆင့်မြင့် ကွန်ပြူတာအသုံးပြုနည်း သင်ခန်းစာများ ➡ Laptop နှင့် Desktop ကွန်ပြူတာ တပ်ဆင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်းများ ➡ ကွန်ပြူတာပြုပြင်ရာတွင် မသိမဖြစ်သိထားရမည့် ဗဟုသုတစာအုပ်များ ➡ Windows Installation လုပ်နည်းအမျိုးမျိုး ➡ Microsoft Word 2007, 2010 အသုံးပြုနည်း ➡ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် စာရင်းအထုတ်အသွင်းနှင့် ဇယားကွက်ဆွဲခြင်းများအတွက် Excel အခြေခံမှသည် အဆင့်မြင့် အသုံးပြုနည်း သင်ခန်းစာများ ➡ ဓာတ်ပုံပြုပြင်ရန်အတွက် လွယ်ကူရှင်းလင်းစွာ တစ်ဆင့်ချင်းရှင်းပြထားသော Photoshop သင်ခန်းစာများ ➡ Adobe Pagemaker အသုံးပြုနည်း ➡ PowerPoint အသုံးပြုနည်းများ ➡ MozilaFirefox, Youtube, Gmail စသည်တို့ကို ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနည်းများ ➡ Skype အသုံးပြုနည်း၊ Twitterအသုံးပြုနည်းများ ➡ Facebook ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနည်း၊ အကောင့်သစ်ဖွင့်နည်းနှင့် လုံခြံစွာထိန်းသိမ်းနည်း သင်ခန်းစာများ ➡ Android ဖုန်းအမျိုးမျိုးအား Root ပြုလုပ်နည်းနှင့် custom rom တင်နည်းများ ➡ A+ နှင့် Electronic ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများ ➡ Hacking နှင့်ပတ်သက်သော သင်ခန်းစာများ ➡ Networking အခြေခံ သင်ခန်းစာများ ➡ Programming သမားများအတွက် (Turbo C, C++, PHP) ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများ ➡ ကိုယ်ပိုင်၀က်ဆိုဒ် တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Memory Stick Error တစုံတရာ ဖြစ်ခဲ့ရင် ပြန်လည်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန် Customer မှတ်တမ်း ကျန်ရှိဖို့ လိုအပ်တဲ့အတွက် Messenger ကနေသာ အမည် လိပ္စာအတိအက် ဖုန်းနံပါတ် ရေးသား၍ မှာယူပေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ အထွေထွေ စုံစမ်းမေးမြန်းချင်လျှင် 09 772 420 001 ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ
Evergreen It & Data store
ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရပ္ေတြကို သင္တန္းတက္စရာမလိုပဲ ကိုယ္တိုင္ ေလ့လာႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ❓ ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာေတြအေႀကာင္း ၿမန္မာလို ရွင္းၿပထားတဲ့ Video သင္ခန္းစာ ၅၀၀ ေက်ာ္၊ ၿမန္မာလို ေရးသားထားတဲ့ Ebooks ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္တဲ့ 16 GB otg Memory Stick - 20000 Ks ၿမန္မာႏိုင္ငံအႏံွ႔ ဘယ္ၿမိဳ႕ကိုမဆို အိမ္အေရာက္ ပစၥည္းေရာက္မွ က်သင့္ေငြ ေပးေခ်ရပါမယ္ ခင္ဗ်ာ တစ္သက္တာ အာမခံ Memory Stick ၿဖစ္တဲ့အတြက္ အသံုးၿပဳရင္း Error တစံုတရာၿဖစ္ခဲ့ရင္ အသစ္ၿပန္လည္ လဲလွယ္ေပးမွာ ၿဖစ္ပါတယ္ က်ေနာ္တို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးမယ့္ Memory Stick ေတြမွာ OTG Cable လည္း ပါဝင္တာေႀကာင့္ Ebook နဲ႔ Video သင္ခန္းစာေတြကို ကြန္ပ်ဴတာေပၚမွာတင္ မက ဖုန္းနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေတာ့လည္း အလြယ္တကူ သက္ေတာင့္သက္သာ ဖတ္႐ႈေလ့လာႏိုင္မွာပဲ ၿဖစ္ပါတယ္ ႀကာခ်ိန္ - ရန္ကုန္/မႏၱေလး/ေနျပည္ေတာ္ - ၁ရက္ အၿခားၿမိဳ႕မ်ား (ရံုးပိတ္ရက္ေတြ ထည့္မတြက္)- ၃ ရက္မွ ၇ ရက္ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ရရိွေလ့လာႏိုင္တဲ့ သင္ခန္းစာမ်ားကေတာ့… ⬇ ▶ အေျခခံ ကြန္ျပဴတာအသံုးျပဳနည္းမ်ား ▶ အဆင့္ျမင့္ ကြန္ျပဴတာအသံုးျပဳနည္း သင္ခန္းစာမ်ား ▶ Laptop ႏွင့္ Desktop ကြန္ျပဴတာ တပ္ဆင္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းနည္းမ်ား ▶ ကြန္ျပဴတာျပဳျပင္ရာတြင္ မသိမျဖစ္သိထားရမည့္ ဗဟုသုတစာအုပ္မ်ား ▶ Windows Installation လုပ္နည္းအမ်ဳိးမ်ိဳး ▶ Microsoft Word 2007, 2010 အသံုးျပဳနည္း ▶ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စာရင္းအထုတ္အသြင္းႏွင့္ ဇယားကြက္ဆဲြျခင္းမ်ားအတြက္ Excel အေျခခံမွသည္ အဆင့္ျမင့္ အသံုးျပဳနည္း သင္ခန္းစာမ်ား ▶ ဓာတ္ပံုျပဳျပင္ရန္အတြက္ လြယ္ကူရွင္းလင္းစြာ တစ္ဆင့္ခ်င္းရွင္းျပထားေသာ Photoshop သင္ခန္းစာမ်ား ▶ Adobe Pagemaker အသံုးျပဳနည္း ▶ Adobe Acrobat အသံုးျပဳနည္း ▶ Microsoft Access, Power Point, InDesign, Illustrator, Visual Basic အသံုးျပဳနည္းမ်ား ▶ MozilaFirefox, Youtube, Gmail စသည္တို႔ကို ကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳနည္းမ်ား ▶ Skype အသံုးျပဳနည္း Twitterအသံုးျပဳနည္းမ်ား ▶ Facebook ကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳနည္း၊ အေကာင့္သစ္ဖြင့္နည္းႏွင့္ လံုျခံစြာထိန္းသိမ္းနည္း သင္ခန္းစာမ်ား ▶ Android ဖုန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအား Root ျပဳလုပ္နည္းႏွင့္ custom rom တင္နည္းမ်ား ▶ A+ ႏွင့္ Electronic ဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ား ▶ Hacking ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား ▶ Networking အေျခခံ အဆင့္ျမင့္ႏွင့္ Wireless ပိုင္းဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ား ▶ Web & Network Security သမားမ်ားအတြက္ အဆင့္ျမင့္ ကြန္ရက္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ား ▶ Windows Server 2003 တည္ေဆာက္ျခင္း၊ Server ပိုင္းအတြက္ (Windows - Linux) ဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ား ▶ Database ဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ား ▶ Programming သမားမ်ားအတြက္ (Turbo C, C++, PHP) ဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ား ▶ ကိုယ္ပိုင္၀က္ဆိုဒ္ တစ္ခုတည္ေဆာက္ျခင္း """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Memory Stick Error တစံုတရာ ၿဖစ္ခဲ့ရင္ ၿပန္လည္ေၿဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ Customer မွတ္တမ္း က်န္ရွိဖို႔ လိုအပ္တဲ့အတြက္ Messenger ကေနသာ အမည္ လိပ္စာအတိအက် ဖုန္းနံပါတ္ ေရးသား၍ မွာယူေပးႀကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ ဖုန္း 09 763 127 534 ကို ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ
ကွန်ပျူတာ ပညာရပ်တွေကို သင်တန်းတက်စရာ မလိုပဲ အိမ်မှာနေရင်း လေ့လာနိုင်မယ်ဆိုရင် စိတ်မဝင်စားကြဘူးလား ❓ December နှစ်ကုန်အထူး Promotion စျေးနူန်းလေးန​ဲ့လက်ဆောင်လေးတွေရယူလိုက်ပါ ချစ်ရတဲ့ Customerများအတွက် မေတ္တာလက်ဆောင်အနေနဲ့ photoshop အဆင့်​​မြင့်သင်ခန်းစာ Videoများ Software များ CorelDraw X7သင်ခန်းစာ Videoများ ထည့်ပေးထါးပါတယ်ခင်ဗျာ ကွန်ပျူတာ နည်းပညာတွေအကြောင်း မြန်မာလို ရှင်းပြထားတဲ့ Video သင်ခန်းစာ ၅၀၀ ကျော်၊ မြန်မာလို ရေးသားထားတဲ့ Ebooks ၁၀၀၀ ကျော် ပါဝင်တဲ့ 32GB OTG Memory Stick - 20000 Ks မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ ဘယ်မြို့ကိုမဆို အိမ်အရောက် ပို့ခ 1000 Ks တည်းနဲ့ မှာလို့ ရပါပြီ ပစ္စည်းရောက်မှကျသင့်ငွေ ပေးချေရပါမယ် ခင်ဗျာ ✅ တစ်သက်တာ အာမခံ Memory Stick ဖြစ်တဲ့အတွက် အသုံးပြုရင်း Error တစုံတရာဖြစ်ခဲ့ရင် အသစ်ပြန်လည် လဲလှယ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ကျနော်တို့ ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Memory Stick တွေမှာ OTG စနစ်လည်း ပါဝင်တာကြောင့် Ebook နဲ့ Video သင်ခန်းစာတွေကို ကွန်ပျူတာပေါ်မှာတင် မက ဖုန်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လည်း အလွယ်တကူ သက်တောင့်သက်သာ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် OTG အသုံးပြုနည်း လမ်းညွှန်စာရွက်လည်း ပူးတွဲထည့်ပေးထားပါတယ် ကြာချိန် - ရန်ကုန်မြို့တွင်း ၃ ရက်၊ အခြားမြို့များ (ရုံးပိတ်ရက်တွေ ထည့်မတွက်) ၃ ရက်မှ ၇ ရက် """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ရရှိလေ့လာနိုင်တဲ့ သင်ခန်းစာများကတော့… ⬇ ➡ အခြေခံ ကွန်ပြူတာအသုံးပြုနည်းများ ➡ အဆင့်မြင့် ကွန်ပြူတာအသုံးပြုနည်း သင်ခန်းစာများ ➡ Laptop နှင့် Desktop ကွန်ပြူတာ တပ်ဆင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်းများ ➡ ကွန်ပြူတာပြုပြင်ရာတွင် မသိမဖြစ်သိထားရမည့် ဗဟုသုတစာအုပ်များ ➡ Windows Installation လုပ်နည်းအမျိုးမျိုး ➡ Microsoft Word 2007, 2010 အသုံးပြုနည်း ➡ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် စာရင်းအထုတ်အသွင်းနှင့် ဇယားကွက်ဆွဲခြင်းများအတွက် Excel အခြေခံမှသည် အဆင့်မြင့် အသုံးပြုနည်း သင်ခန်းစာများ ➡ ဓာတ်ပုံပြုပြင်ရန်အတွက် လွယ်ကူရှင်းလင်းစွာ တစ်ဆင့်ချင်းရှင်းပြထားသော Photoshop သင်ခန်းစာများ ➡ Adobe Pagemaker အသုံးပြုနည်း ➡ PowerPoint အသုံးပြုနည်းများ ➡ MozilaFirefox, Youtube, Gmail စသည်တို့ကို ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနည်းများ ➡ Skype အသုံးပြုနည်း၊ Twitterအသုံးပြုနည်းများ ➡ Facebook ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနည်း၊ အကောင့်သစ်ဖွင့်နည်းနှင့် လုံခြံစွာထိန်းသိမ်းနည်း သင်ခန်းစာများ ➡ Android ဖုန်းအမျိုးမျိုးအား Root ပြုလုပ်နည်းနှင့် custom rom တင်နည်းများ ➡ A+ နှင့် Electronic ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများ ➡ Hacking နှင့်ပတ်သက်သော သင်ခန်းစာများ ➡ Networking အခြေခံ သင်ခန်းစာများ ➡ Programming သမားများအတွက် (Turbo C, C++, PHP) ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများ ➡ ကိုယ်ပိုင်၀က်ဆိုဒ် တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Memory Stick Error တစုံတရာ ဖြစ်ခဲ့ရင် ပြန်လည်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန် Customer မှတ်တမ်း ကျန်ရှိဖို့ လိုအပ်တဲ့အတွက် Messenger ကနေသာ အမည် လိပ္စာအတိအက် ဖုန်းနံပါတ် ရေးသား၍ မှာယူပေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ အထွေထွေ စုံစမ်းမေးမြန်းချင်လျှင် 09 772420001 ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ
ATXcursions - River Tubing in Austin, TX!
Pâques ou pas Pâques ?!
Consultor de Ventas - Sales Business School
Shelly ng 梦想家园
好消息。好消息。 新山波地豪华公寓比“一马房屋”还便宜。 而且还在新山波地区。如果错过了，这次绝对不能再错过。 还可申请津贴高达 ＃Rm30000的政府津贴 http://www.wasap.my/60165626355/tl3 http://www.wasap.my/60165626355/tl3 新山坡底区唯一 售卖 2个阳台 3房， 主人房 + 客厅 双阳台，两种享受，两种功能‼ 这样一间5⭐️级位于波底3大房的公寓需要多少钱？RM600K，现在只需RM350K。 现在购买还能享有特殊早鸟优惠❗单位有限，优惠有限 底于市价30%+回扣高达RM40000+限量津贴RM30000。 超旺地点，就在 JB 坡底 大路旁边！ 高级公寓设施，适合自住和投资。 带给您舒适与享受生活的环境 新山最大型的广场，就在你邻近让你衣食住行也方便 无论是自住还是投资还是Airbnb都很适合。 只需2年在让你屋子翻倍。 也有提供代租，代卖服务。 房产买在 #Custom及shopping mall附近及旁边Airbnb出租10天足以让你免费供房 单位有限!马上pm或点击 Whatsapp。点击以方便发更多资料或照片给你。 http://www.wasap.my/60165626355/tl3 http://www.wasap.my/60165626355/tl3 http://www.wasap.my 60165626355/tl3
FIRST TIME PROMOTION! Wanna Transform Your Body in6WEEKS Absolutely FREE? We can only take the FIRST 40 ladies because it's our first time doing this FOR FREE (and we typically fill up in 24 hrs)! ‼️ IF THE LINK WORKS WE STILL HAVE A SPOT FOR YOU ‼️ https://chicagoprimalchallenge.com/optin-6-week-1 Yes. This offer is for real. Main reason – we are trying to get awesome human beings in the door. WARNING**We are going to try and over-deliver on services and experience to try and get you to not want to go anywhere else. Cool? Awesome. So who is this for? This is for people who… …are looking to undergo an AMAZING transformation (you can click to seeaBAZILLION on the next page) …want to be coached by highly qualified coaches with years of experience (they also have families and are real nice folks who LOVE fitness—weirdly obsessed actually …want to go toaspotless facility (yep, we bleached it) …want to plugin toacrazy awesome community of like-minded people who are relaxed and just want to have fun and be healthy. …want to look sexy AYY EFFF (who doesn’t) …love puppies (if you don’t, just stop here) …hate excuses (again, beapositive polly) …loveagood hair day when it comes your way …loves it when their favorite song comes on (Let it go) So if this mythical unicorn of an individual sounds like you…then boy do we haveaFREE6Week Challenge we’d love to coach you through. Make sure to not let “I’ll think about it” or “Maybe” or “I’m not sure” get in the way. Register now while it’s fresh on your mind. “I regret that workout and healthy living” – said no one ever. Don’t miss out. Take one of the spots before this FREE opportunity disappears. PS – this is gonna be so much funnnn. But for real – we’re awesome at transforming bodies and we want to show you our best stuff FO’ FREE. https://chicagoprimalchallenge.com/optin-6-week-1 Just take the tiniest little next step of trust and TAP THE LINK WITH YOUR THUMB AND SIGN UP ON THE NEXT PAGE to get this party started.
'Zeuz Service Section'⚙️ ⛳YAMAHA YZF-R1 คุณ ศุภกฤษ - ลูกค้านำรถเข้ามาตั้งวาล์วโปรโมชั่น 1790 บาท - ถอดล้างหัวฉีด-เรือนลิ้นเร่ง - ล้างหัวฉีดภายในทั้งระบบด้วย Sonic Jet Cleaner - ไล่น้ำมันเบรคทั้งระบบหน้า-หลังด้วย Voltronic Super DOT4 - เปลี่ยนหัวเทียนประสิทธิภาพสูง NGK LASER Iridium - ไล่น้ำยาหล่อเย็นด้วย Voltronic R30 - เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง Voltronic XM - ทำความสะอาดเครื่องยนต์ด้วย Voltronic E20 Flush Engine - ปกป้องเครื่องยนต์ด้วยสาร Boron Ceramic จาก Voltronic E59 - เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องแท้ Yamaha R1M - ติดตั้งสวิทช์แรงดันน้ำมันเบรค Brembo - ติดตั้งชุดมอเตอร์สตาร์ท - ล้างเคลือบโซ่ด้วย Voltronic IX50 - ล้างเคลือบกรองอากาศแต่งด้วยน้ำยา BMC - ล้างรถ + เช็คฟรี 10 รายการ ⛳HONDA CBR500R คุณ ภูริณัฐ - ลูกค้านำรถเข้ามาตั้งวาล์วโปรโมชั่น 1,099 บาท - ถอดล้างหัวฉีด-เรือนลิ้นเร่ง - ล้างหัวฉีดภายในทั้งระบบด้วย Sonic Jet Cleaner - เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง Motul H-Tech 10w40 - ทำความสะอาดเครื่องยนต์ก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วย Voltronic E20 (Engine Flush) - เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง - เปลี่ยนหัวเทียนประสิทธิภาพสูง NGK Iridium - ล้างเคลือบโซ่ด้วย Voltronic IX50 - ล้างรถ + เช็ครถทั่วไป 10 รายการ -------------------------------------------------------------------- ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ไว้วางใจทีมงาน ZEUZ เราจะรักษาประสิทธิภาพและจะพัฒนาฝีมือต่อไป เพื่อตอบโจทย์ความมั่นใจและไว้วางใจของลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการกับเรา 'สุซฝ่ายบริการ' รับซ่อมแซม รถ Big Bike โดยเฉพาะ ทุกอาการทั้งหนัก เบา โดยทีมผู้ชำนาญงาน มีประสบการณ์สูง "ระบบไฟ, ระบบเครื่องยนต์, ระบบช่วงล่าง แก้ได้หายขาด (รับแก้อาการรถเรื่อรังซ่อมที่ไหนไม่จบ-->เราจบให้ได้,รถชน, รถพัง ยันประกอบใหม่ทั้งคัน) รวมทั้งจำหน่ายของตกแต่ง รถ Big Bike ทุกรุ่น ทุกสายพันธุ์....ราคาวัยรุ่น รับประกันผลงาน ดูแลอย่างดีทุกคัน สอบถามรายละเอียด Line ID : @zeuz.performance มี @ ด้วยครับ Tel. 02-100-9066 , 093-329-5519 เปิดปฏิบัติการ: 10.00 - 20.00 วันอังคาร ถึง วันอาทิตย์ ปิด: วันจันทร์ สถานที่ใกล้เคียง:ใกล้ ตลาดหัวมุม ..The Walk เกษตรนวมินทร์ ร้าน สมพงษ์ซีฟู๊ด ศุนย์ Yamaha Riders Club ศูนย์ Honda Big Wing เลียบทางด่วนรามอินทรา,Central Eastville ,CDC Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Honda, Ducaiti, BMW, Aprilia, MV Agusta, Harley-davidson ฯลฯ
מוכנים לזה? ⏰ מבצע לעוד יום! פותחים את שנת 2020 עם מערכת הבטיחות לרכב מצילת החיים של מובילאיי במחיר שאסור לפספס - רק 1,890 ש"ח בלבד!! ✨ וגם - ️ 1,500 ש"ח הנחה באגרת הרישוי לרכב. התקנה חינם בבית הלקוח ללא תוספת תשלום. מהר לפני שייגמר! למידע נוסף והצטרפות לחצו כאן>> http://bit.ly/2NuteXh
Loja Casacor Suvinil Videira
MELHOR TINTA ÓLEO DO MERCADO Suvinil ÓleoeBrilho Suvinil ÓleoeBrilho é uma tinta esmalte para madeirasemetais. Ela garante um acabamento com brilho intenso às superfícies dentroefora de casa.
FOOTBIK-Kharkiv: Футбол для дошкольников
Vinhomes Smart City PhÃ¢n khu Sapphire2chuáº©n bá» bÃ n giao thÃ¡ng 7/2020 vá»i nhiá»u khuyáº¿n máº¡i siÃªu khá»§ng: Táº·ng Voucher mua xe Vinfast tá»« 70 Äáº¿n 200 triá»u Chá» 10% kÃ½ HÄMB. Chiáº¿t kháº¥u theo tiáº¿n Äá» tá»« 7.5 - 9% tÃ¹y tÃ²a. Táº·ng quÃ tÃ¢n gia tá»« 20 Äáº¿n 45 Triá»u Äá»ng cho 1 cÄn há» (Äá»iâ¦ å±å¼ vá»i phÃ¢n khu Sapphire 2). Há» trá»£ 70% giÃ¡ trá» cÄn há» vá»i lÃ£i suáº¥t 0% vÃ Ã¢n háº¡n ná»£ gá»c (vÃ o á» hÆ¡n 1 nÄm má»i pháº£i tráº£ gá»c lÃ£i). Vinhomes Smart City â Äáº¡i ÄÃ´ thá» thÃ´ng minh Äáº³ng cáº¥p quá»c táº¿ Äáº§u tiÃªn táº¡i Viá»t Nam vá»i hÃ ng ngÃ n tiá»n Ã­ch hÃ ng Äáº§u táº¡i Viá»t Nam: ï¸Trung tÃ¢m thÆ°Æ¡ng máº¡i cao3táº§ng rá»ng hÆ¡n 7Ha lá»n nháº¥t trong há» thá»ng Vincom. ï¸VÆ°á»n Nháº­t Báº£n rá»ng 6,6 Ha vá»i nhÃ hÃ ng Nháº­t,suá»i cÃ¡ chÃ©p,cÃ´ng viÃªn lá»
há»i ÄÃ¨nâ¦ å±å¼
Agora é possível fazer penteados firmesevolumosos que você sempre sonhou de forma rápida, práticaebarata!! ⏱Cabelos firmesevolumosos por mais tempo!‍♀ Conheça o Bello Coqueesimplifique sua vida ➡http://bit.ly/bello-coque
不知道自己的生辰，也能算命嗎？ 到底是什麼服務，這麼厲害？ 精彩的訪談內容，千萬別錯過喔！
¿Qué tal es tu capacidad de análisis en el fútbol? Ponteaprueba y gana con LIGA14
Viagem à ParatyeTrindade, RJ Férias de Julho Saída quinta-feira 25/07 - 21:00h Retorno domingo 28/07 - 14:00h Transporte em ônibus com poltronas soft reclináveis, encosto de pernas, ar-condicionado, pontos de recarca de celular, águaebanheiro Investimento (valores por pessoa): Sem Passeio de Escuna: R$ 620,00 Com Passeio de Escuna: R$ 680,00 Dividimos em até 04 vezes sem juros - detalhes no site Dividimos em até 12 vezes no cartão de crédito com acréscimos Já inclusos no valor da viagem: Transporte idaevolta Traslados para as atrações do roteiro Hospedagem com café da manhã Guias acompanhantes da nossa empresa Guia local obrigatório Taxas de entrada no centro histórico Passeio de escuna em Paraty (no segundo valor) Seguro contra acidentes no transporte Todos os detalhes em: https://bhecoturismo.com.br/roteiro/paraty/ Contato VivoeWhatsapp: (31)99580-5446